B A G A I T T I I N I S I N G A H E ! -
bilisummaa January 2, 2017	Leave a comment
Bara gaarii – bara guddinaa
Bara balleeysinu shiraa fii jallina
Bara tokkummaa – bara nageenyaa
Bara lagannu wal jibbaaf hammeenya!
Bara badhaadhinaa – bara quufaa
Bara dhabamsiifnu vaayrasii hinaaffaa!
Bara dhugaa – bara haqaa
Bara callaa malee fageeysinu baaqa!
Bara araaraa – bara milkiidhaa
Bara dhaabbattu ajjeechaafi hidhaa!
Bara kabajaa – bara jaalalaa
Bara dhageenyu waan gurraaf tolaa!
Bara injifannoo – bara bilisummaa
Bara irra aanu dhaloonni ammaa!
Bara mo’aannu – bara qeerroo
Bara irraa maayyii cunqursaafi roorroo
Bara walin qoonne – bara walin komanne
Bara hiddaan buqqaafnu jalee fii Wayyaanee!
Bara bilisoomnee abbaa biyyaa taanu,
Bara kan faffacaane walitti dachaanu,
Bara Aadaaf Afaan keenyaan boonnu,
Bara sirna gadaa deebifnee gad dhaabnu!
Barri nagayaafi bara milkiiti!
Previous OMN tamsaasa Afaan Arabaa eegaluun akka jabaatti irratti haasayamaa jira.
Next ABO 2017 New year Message